यौन-स्वास्थ्य Archives - ejhajhalko.com
काजु खानाले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउँछ फाइदै फाइदा
काजु प्रायः सवैले खाएकै हुनुपर्छ । शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने काजु खानुका धेरै पाइदा छन् । यसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ । थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड चलेन भने काजु खानाले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा थपिनगई फुर्ति आउँछ । काजु खानुका केही फाइदा यस्ता छन्– 1.काजुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । नियमित काजु खाँदा...
नि;शुल्क रक्त परिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न
पोखरा,११ साउन । राष्ट्रिय रक्तदान दिवसको सन्दर्भमा शनिबार पोखरा ५ मालेपाटनमा भएको शिविरमा ६ सय ८२ जनाको सित्तैमा रगत जाँच गरि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोखरा ५ उपशाखा मालेपाटनको आयोजना र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की शाखाको सहयोगमा भएको शिविरमा रगतमा हुने खराब बोसो (टिजी) र मधुमेहसम्बन्ध...
तपाईको मिर्गौलामा पत्थरी भएको त छैन ? यसरी थाहा पाउनुस्
मिर्गौलाले शरिरका हानीकारण पदार्थलाई वाहिर फ्याक्ने र काम लाग्ने तत्वहरुलाई विभिन्न सम्बन्धित अंगमा पठाउने काम गर्छ । मिर्गौलामा हुने पत्थरी मानिसहरुको कमन समस्या जस्तै भएको छ । पत्थरीको समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । अस्वस्थ्यकर जीवनशैली र असन्तुलित खानपानका कारण मानिसहरुमा पत्थरीको ...
१३ सय एमबिबिएस डाक्टर बिरामी जाँच्न अयोग्य
काठमाडौं, १४ असार । एमबिबिएस उत्तीर्ण भए पनि १३ सय डाक्टर बिरामी जाँच्न भने अयोग्य छन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने चिकित्सक लाइसेन्स (नाम दर्ता) परीक्षामा फेल हुँदा उनीहरू अयोग्य ठहरिएका हुन । लगातार ३६ पटकसम्म फेल भएका डाक्टर पनि छन । विश्वविद्यालयबाट हुने परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि बिरामी जाँच्ने वैधानिकता लिन...
एजेन्सी– हिन्दूहरूले गोमूत्र (गहुँत)लाई पवित्र मानेर प्रयोग गरेको त हामीले प्रत्यक्ष देखेरभोगेकै कुरा हो । तर, मानिसकै पिसाब पिउने कुरा मात्र गर्दा पनि अधिकांशलाई घिन लाग्न सक्छ । तर, कतिपय मानिसहरू स्वमूत्रपान गर्दा स्वस्थ भइने भन्दै त्यसको प्रयोग गर्दै आइरहेकै छन् । भारतकी एक ३३ वर्षीया योग प्रशिक्षक केली ओकली...
गर्मी याममा खरबुजा खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
गर्मी समयमा अधिकांसको रोजाइमा पर्ने फल हो खरबुजा । बृद्ध देखि बच्चासम्मको रोजाइमा यो फल पर्दछ । हामी यो फल प्रशस्त मात्रामा खान्छौ तर यसका फाइदाका बारेका अनभिज्ञ हुन सक्छौ । गर्मी याममा बजारमा पाइने यस फल खरबुजामा ९५ प्रतिशत पानी हुनुका साथै भिटामिन तथा विभिन्न खाले लवण पनि प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा प्रयाप्त ...
मन्त्रालयको शौचालयमा प्याड भेन्डिङ मेसिन जडान ;अब दुई रुपैयाँ मै महिनावारी प्याड
काठमाडौं, १४ जेठ । खानेपानी मन्त्रालयले छैटौं अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसरमा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिनको सुरुवात मन्त्रालयको भवनबाटै सुरु गरेको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले महिलाहरुलाई महिनावारीको समयमा समस्या नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको भवनमा स्यानिटरी प...
विवाहित जोडीले सातामा कति पटक यौनसम्पर्क राख्नु राम्रो ? यस्तो छ वैज्ञानिक तथ्य
एजेन्सी । कुनैपनि व्यक्तिको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनका लागि यौनको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्रै होइन यसले दुई जनाबीचको समझदारी र सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउँछ । जसले गर्दा खुशीले भरिएको जीवन बिताउँन थप मद्दत पुग्छ । यौनलाई सबैभन्दा खुशको रुपमा लिईएपनि कति पटक गर्ने भन्ने विभिन्न खाले तर...
खाना खाईसकेपछी यी गल्तीहरू गरेमा क्यान्सर हुन सक्छ ; सचेत रहनुुहोस
केवल स्वस्थ खानाले मात्र शरीर स्वस्थ रहँदैन । यो पनि ध्यान राख्न आवश्यक हुन्छ कि खान खाईसकेपछी हामी के गर्छौँ । खानाको पुरा फाइदा हामीलाई तब मिल्छ जब डाइजेशन सहि तरिकाले भैरहेको हुनेछ र खानाको सम्पूर्ण न्यूट्रीएन्ट्सलाई हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्छ । तर हामी केही यस्ता गल्तीहरू गर्ने गर्छौँ, जसको हाम्रो शरीरमा नकारात्मक...
जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल एच३एन२ इन्फ्लुएन्जा भएको पुस्टि
बिगत ३ सातादेखि जाजरकोटमा प्रकोपको रुपमा फैलिएको भाइरल ‘ए’ टाइप एन्फ्लुएन्जा ‘एच३एन२’ (H3N2) भएको पुष्टि भएको छ । भाइरल ज्वरोबाट जाजरकोटमा १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । भाइरलका जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका कारण १ हजार ५ भन्दा बढी स्थानीय बिरामी परेका छन् । बिरामीबाट संकल गरिएको नमूना परीक्षण गर्दा उक्त भाइरल ‘...
चिसो मौसममा फैलिने रोग र त्यसको समाधान
काठमाडौं । मानिसहरू चिसो देखी संवेदनशील हुन्छन् र यो मौसममा विभिन्न रोगहरू विकास हुने गर्दछ । जाडो मौसमले विभिन्न रोग र श्वास प्रसास समस्याहरु निमत्याउने गर्दछ र त्यसबाट हामी सजक हुनुपर्छ । जाडो महिनाको अन्त्यमा बढी सकृय हुने यो प्रकोपले गर्मि-वर्षामा त महामारी नै फैलाउछ । यी समस्याहरु हरेक बर्ष जाडो मौसम मा देख...
यौन दुर्वलता समस्या समाधानका उपायहरु
एजेन्सी । यौन दुर्वलता समस्या समाधान गर्न धेरै औषधिको प्रयोग गर्दा पनि समस्या समाधान हुँदैछ । जसले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यौनशक्ति बढाउन घरेलु उपाय नै लाभान्वित हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यौन शक्ति बढाउन सबैभन्दा पहिले तपाईंले खानपानमा सुधार गर्नुपर्छ र सन्तुलित भोजन खानुपर्छ । शरी...
सिरहामा १५ प्रतिशत बालबालिकालाई कुपोषण
सिरहा । बालबालिकाहरुमा देखिएको कुपोषण हटाउन सिरहामा शिघ्र कुपोषण एकिकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ । गएको भदौ महिनामा तराई मधेशमा आएको बाढीको चपेटामा परेका बालबालिकाहरुको दृष्टिगत गर्दै सिरहामा कुपोषण हटाउन शिघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्रमुख डा. चुमनल...
महिनावारीको बारेमा भ्रम र यथार्थ, सबै महिलाहरुले जान्नु आवश्वय !
-मासिक धर्मको पिडा यो महिलाहरुलाई हुने सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पहिलो दिनको गम्भीर पिडालाई सामान्य मानिन्छ र यसलाई तपाईं चकलेट खाएर पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ । विश्वास गर्नुहोस्, यसले साँच्चै नै काम गर्दछ । तर यदि तपाईंलाई अरु दिनमा पनि पिडा हुने गर्दछ भने तपाईं स्त्री रोग विशेषज्ञको भेट्न पक्कै जानुहोस् । -गर्भव...
मोबाइलबाटै गर्भवती महिलाको तथ्यांक राखिँदै
बैतडी । बैतडीमा मोबाइलबाटै गर्भवती महिलाको तथ्यांक राख्ने थालिएको छ । मेडिक मोबाइल नामक संस्थाको सहकार्यमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले प्रत्येक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गर्भवतीको तथ्यांक राख्न शुरु गरेको हो । प्रत्येक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल दिएर गर्भवती महिलाको तथ्यांक राख्ने कार्य शुरु भ...
भक्तपुर । नेपालमा पहिलो पटक ‘बृहत् राष्ट्रिय क्षयरोग प्रसार सर्वेक्षण’ शुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले आगामी जनवरीदेखि शुरु गर्न लागेको सो सर्वेक्षणले देशभरका नयाँ र पुराना क्षयरोगीको अवस्था वारे जानकारी लिन सक्ने केन्द्रका निर्देशक निर्देशक डा.केदार नरसिंह केसीले बताए । उनले भने, “देशभरका हिमा...
रुकुममा पखालाको प्रकोप
रुकुम । रुकुम पश्चिममा पखालाको प्रकोप देखिएको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा दैनिक बिरामी बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी दिएका छन् । हिजो बिहीबारसम्म जिल्ला अस्पताल सल्लेमा मात्र २५ जना पखालाका बिरामीले नियमित उपचार गराइरहेका छन् । जिल्लामा अहिले दुई वर्षमुनिका बालबालिकामा पखालाले संक्रमण गरेको जिल्ला अस्पताल सल...
१०४ वर्षीय वृद्धले पनि फिर्ता पाए आँखाको ज्योति
म्याग्दी । उराठ र पट्यारलाग्दो बुढ्यौली, त्यसमा पनि आँखाले देख्न छोडेपछि घरको चौघेराभित्र कैद भएर बस्नु पर्दाको पीडा कम दुःखलाग्दो हुँदैन । यस्तै दुःख र पीडामा हुनुहुन्थ्यो म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६, दिच्यामका १०४ वर्षीय ओमलाल निउरे । निउरेका दुवै आँखा दुई वर्षअगाडि बन्द भएपछि उहाँलाई रात र दिन एकै लाग्थे ...
बालबालिकाहरुको आँखामा रेष्टिनोब्लाष्टोमा यसकारण हुनसक्छ!
काठमाडौँ । के तपाईंले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको आँखाको नानीमा अस्वाभाविक टल्कने थोप्लो,आँखा असामान्यरूपमा रातो भएको, बिस्तारै बाङ्गो अर्थात् डेडो हुँदै गएको देख्नुभएको छ ? कहिलेकाहीँ सामान्य समस्याले यस्ता लक्षण देखिएको भए पनि यो पाँचवर्षमुनिका बच्चालाई मात्र देखिने आँखाको पर्दामा हुने एक प्रकारको क्यान्सर रेष...
जाडो मौसममा आफ्नो सुन्दरता चम्काउन यसरी गर्नुहोस मेकअप !
जाडो मौसम छ। पार्टीमा जानुपर्ने पनि यही वेला बढी हुन्छ। तर, चिसोले छालालाई बढी सताउने पनि यही वेला गर्छ। यस्तो अवस्थामा अधिकांश तनावमा हुन्छन्। तर, तनाव लिनुभन्दा छालाको सुरक्षा र मेकअपको उचित तरिका जान्नु नै उत्तम हुन्छ : मौसमअनुसार मेकअप गर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ। तर, छालाको अवस्था राम्रो भए मात्रै मेकअप गरेको अ...
चितवन मेडिकल कलेजलाई त्रिविको अनुरोध : बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता देऊ !5views